2 Samuel 17 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
17 Ahitofel wee sị Absalọm: “Biko, ka m họrọ puku ndị ikom iri na abụọ bilie chụwa Devid n’abalị a.+ 2 M ga-abịakwasịkwa ya mgbe ike gwụrụ ya na mgbe aka ya abụọ+ na-adịkwaghị ike, m ga-emekwa ka ọ maa jijiji; ndị niile ya na ha nọ ga-agba ọsọ, ọ bụkwa naanị eze ka m ga-egbu.+ 3 Ka m kpọghachitere gị mmadụ niile. Mmadụ niile ịlọghachi dabeere n’ihe ga-eme nwoke ahụ ị na-achọ; mmadụ niile ga-anọkwa n’udo.” 4 Okwu ahụ wee dị nnọọ mma n’anya Absalọm+ nakwa n’anya ndị okenye niile nke Izrel. 5 Otú ọ dị, Absalọm sịrị: “Biko, kpọọkwa Hushaị+ bụ́ onye Akaịt, ka anyị nụrụ ihe ya onwe ya ga-ekwu.” 6 Hushaị wee bịakwute Absalọm. Absalọm wee sị ya: “Lekwa ihe Ahitofel kwuru. Ọ̀ bụ anyị mee ihe o kwuru? Ọ bụrụ na anyị agaghị eme ya, kwuo ihe a ga-eme.” 7 Hushaị wee sị Absalọm: “Ndụmọdụ nke ugbu a Ahitofel nyere adịghị mma!”+ 8 Hushaị wee gaa n’ihu ịsị: “Gị onwe gị maara nna gị na ndị ikom ya nke ọma, na ha dị ike,+ bụrụkwa ndị ihe na-ewute ná mkpụrụ obi,+ dị ka nne anụ ọhịa bea nke na-ahụkwaghị ụmụ ya n’ọhịa;+ nna gị bụkwa dike,+ ọ gaghịkwa eso ndị ahụ nọrọ n’abalị. 9 Lee! Ugbu a, o zoola+ n’otu olulu ma ọ bụ n’ebe ọzọ; ọ ga-erukwa na o buru ụzọ wakpo ha, onye nụrụ ya aghaghị ịsị, ‘E meriwo ndị so Absalọm!’ 10 Ike ga-agwụ+ ọbụna dike nke obi ya dị ka obi ọdụm;+ n’ihi na Izrel dum maara na nna gị bụ dike,+ otú ahụkwa ka ndị dike niile so ya dị.+ 11 Mụ onwe m na-adụ ọdụ, sị: Ka a hụ na a kpọkọtaara gị Izrel dum, malite na Dan ruo Bia-shiba,+ ha ga-adịkwa ọtụtụ dị ka ájá dị n’akụkụ oké osimiri,+ gị onwe gị ga-esokwa gaa agha ahụ.+ 12 Anyị ga-abịakwasịkwa ya n’otu n’ime ebe a na-aghaghị ịhụ ya,+ anyị ga-adakwasị ya dị nnọọ ka igirigi+ si ada n’ala; ọ dịghịkwa onye ga-afọdụ n’etiti ya na ndị ikom niile ya na ha nọ. 13 Ọ bụrụkwa na ọ gbaba n’otu obodo, Izrel dum ga-achịrị ụdọ gaa n’obodo ahụ, anyị ga-adọrọ ya dọkpuo na ndagwurugwu, ruo mgbe a na-agaghị ahụ ọbụna otu obere okwute n’ebe ahụ.”+ 14 Absalọm na ndị ikom niile nke Izrel wee sị: “Ndụmọdụ Hushaị onye Akaịt ka ndụmọdụ Ahitofel mma!”+ Jehova n’onwe ya enyewo iwu+ iji mebie ndụmọdụ+ Ahitofel, ọ bụ ezie na ọ dị mma,+ ka Jehova wee mee ka ọdachi+ dakwasị Absalọm. 15 E mesịa, Hushaị gwara Zedọk+ na Abayata bụ́ ndị nchụàjà, sị: “Lekwa ihe Ahitofel dụrụ Absalọm na ndị okenye Izrel n’ọdụ; lekwa ihe m dụrụ ha n’ọdụ. 16 Ugbu a, zie ozi ọsọ ọsọ gwa Devid,+ sị, ‘Anọla na mbara ọzara nke ala ịkpa n’abalị a, kama hụ na ị gafeere,+ ka a ghara ilomi+ eze na ndị niile so ya.’” 17 Ka Jọnatan+ na Ahimaz+ guzo n’En-rogel,+ otu nwaanyị na-eje ozi gara kọọrọ ha. Ha wee pụwa, ebe ọ bụ na ha aghaghị ịkọrọ Eze Devid; n’ihi na ha agaghị anwa anwa mee ka a hụ ha mgbe ha na-abanye n’obodo. 18 Otú ọ dị, otu nwa okorobịa hụrụ ha wee kọọrọ Absalọm. Ha abụọ wee gbapụ bịarute n’ụlọ otu nwoke na Bahurim,+ bụ́ onye nwere olulu mmiri n’èzí ya; ha wee banye n’ime ya. 19 Nwunye ya wee were ihe kpuchie olulu mmiri ahụ ma kpokwasị ọka* a kụjasịrị akụjasị n’elu ya;+ a mataghịkwa banyere ya ma ọlị. 20 Ndị na-ejere Absalọm ozi wee bịakwute nwaanyị ahụ n’ụlọ ya wee jụọ ya, sị: “Olee Ahimaz na Jọnatan?” Nwaanyị ahụ wee zaa ha, sị: “Ha si ebe a gafere gawa na mmiri.”+ Ha chọgidere ha, ma ha achọtaghị ha,+ ha wee laghachi Jeruselem. 21 O wee ruo mgbe ha lawara na ha si n’olulu mmiri ahụ pụta wee gaa kọọrọ ya Eze Devid wee sị Devid: “Bilienụ gafee mmiri a ngwa ngwa; n’ihi na lekwa ihe Ahitofel dụrụ n’ọdụ+ ka e mee unu.” 22 Devid biliri ozugbo, ya na ndị niile so ya, wee na-agafe Jọdan ruo mgbe chi bọrọ,+ ruo mgbe ọ na-enweghị onye fọdụrụ nke na-agafebeghị Jọdan. 23 Ma Ahitofel hụrụ na e meghị ihe ọ dụrụ n’ọdụ,+ o wee dokwasị ihe o ji anọkwasị n’ịnyịnya ibu wee bilie laa n’ụlọ ya, n’obodo ya.+ O wee nye ezinụlọ ya iwu+ ma kwụgbuo+ onwe ya, o wee si otú a nwụọ.+ E wee lie+ ya n’ebe ili ozu nke nna nna ya hà. 24 Ma Devid bịarutere Mahaneyim,+ Absalọm gafere Jọdan, ya na ndị ikom niile nke Izrel ndị so ya. 25 Ọ bụ Amesa+ ka Absalọm họpụtara ka ọ nọchie Joab+ ịbụ onyeisi ndị agha; Amesa bụ nwa otu nwoke aha ya bụ Itra+ onye Izrel, bụ́ onye ya na Abigel+ nwa Nehash, nwanne Zeruya, nne Joab, nwere mmekọahụ. 26 Izrel na Absalọm wee maa ụlọikwuu ha n’ala Gilied.+ 27 O wee ruo na ngwa ngwa Devid bịarutere Mahaneyim, Shobaị nwa Nehash, bụ́ onye Raba+ nke ụmụ Amọn,+ na Mekia+ nwa Amiel+ onye si Lo-diba, na Bazilaị+ onye Gilied nke si Rogilim+ 28 butere ihe ndina na efere ukwu na ite ụrọ, na ọka wit na ọka bali na ntụ ọka+ na ọka a ṅara n’ọkụ+ na akịdị+ na lentil+ na ọka a mịrị amị; 29 ha wetakwaara Devid na ndị so ya mmanụ aṅụ+ na atụrụ na mmiri ara ehi rahụrụ arahụ+ ka ha rie,+ n’ihi na ha sịrị: “Ndị a bụ ndị agụụ na-agụ, ndị ike gwụrụ na ndị akpịrị na-akpọ nkụ n’ala ịkpa.”+